Hihaona amin'ny UMIDIGI BISON X10 Series, finday avo lenta ho an'ny mpitsangatsangana | Androidsis
Hihaona amin'ny BISON X10 Series an'i UMIDIGI, finday avo lenta ho an'ny mpitsangatsangana
Emilio Garcia | 22/09/2021 13:56 | Nohavaozina amin'ny 22/09/2021 14:02 | Fitaovana Android, Finday
Efa manana vaovao momba ny finday avo lenta vaovao izahay Série BISON X10 nataon'i UMIDIGI, maodely izay mampanantena fa mateza kokoa sy mahazaka noho ny maro amin'ireo mpifaninana aminy, miaraka amin'ny famaritana pitsopitsony izay hojerentsika etsy ambany.
1 Batterie maharitra maharitra-vonona
2 Volavola kanto sy mahatohitra
3 Herinaratra sy fitehirizana mifanaraka
4 Mandrosoa sy vidiny
Batterie maharitra maharitra-vonona
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ity finday ity dia ny bateria, izay misy 1650 Mah, miaraka amin'ny fitsiriritana 10W fiampangana haingana.
Ity, amin'ny teny azo ampiharina, dia fintino amin'ireto manaraka ireto:
Fahaleovan-tena 550 miaraka amin'ny finday miala sasatra.
Fahaleovan-tena 52 ora miaraka amina antso am-pahavitrihana.
Fahaleovan-tena mandritra ny 28 ora miaraka amin'ny antso an-tsary.
15 ora fizakan-tena milalao ny lalao tianao.
Ny olon-drehetra dia tia manana bateria betsaka, satria tsy fantatrao hoe rahoviana ianao no mila mampiasa findainao tsy misy charger eo an-tànana, noho izany safidy tsara indrindra ny tsy manahy ny amin'ny famoahana azy mandritra ny ora maro sy ora maro.
Raha ny an'ny fanoherana, raha ny fahitan'ny marika ny finday matanjaka dia manana IP68 sy IP69K fanamarinana izy, ary koa Multifunctional NFC, saingy ilaina izany raha mividy ny kinova Espaniola isika, satria ilaina ny mifanentana hiasa amin'ny banky ao amin'ny firenenao.
Volavola kanto sy mahatohitra
Ny andiany BISON X10 vaovao dia manintona ny saintsika noho ny fitambaran'ireo rafitra matanjaka miaraka amina endrika kanto. Ny fonony any aoriana dia tsy hamela anao tsy hiraharaha, satria vita amin'ny fiberglass matte, miaraka amin'ny sisiny vita amin'ny rubber, ary ny zana-by vy mitarika ao amin'ny orinasa, izay manome antoka fomba iray tsy manam-paharoa amin'ny finday avo lenta sy fiarovana mafy amin'ny rano, vovoka ary fitetezana tsy nahy miaraka amin'izay. Izany rehetra izany, noho ny fanamarinana ananany.
Ireo fitsapana sy fanamarinana ireo dia, manokana kokoa, an'ny IP68, IP69K ary MIL-STD-810G, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny fivoahana any an-tsaha miaraka aminy ianao na hanao hetsika mety hampidi-doza. Io dia hahafahanao mankafy ny hetsika ivelany ataonao, satria telefaona natao manokana hanoherana ny ivelan'ny trano izany.
Manokana, ny mari-pankasitrahana IP69K dia mamela azy hilentika anaty rano hatramin'ny 1,5 metatra mandritra ny 30 minitra misesy, ary koa mahatohitra ny mari-pana avo lenta toy ny rano amin'ny 80º C. Mikasika ny riandrano, dia voasedra izany mahazaka fikorontanana hatramin'ny 1,5 metatra ny haavony.
Mila manampy an'io isika Efijery 6,53 inch miaraka amin'ny tahan'ny 20: 9. Raha manontany tena ianao raha efijery lehibe na kely izy io: azonay atao ny manamarina fa efijery lehibe io, fa raha manana tanana lehibe ianao dia tsy handany vola aminao izany.
Misaotra an'ity efijery lehibe ity dia ho afaka hijery ireo andian-tantara tianao indrindra ianao nefa tsy mila manamboatra ny masonao be loatra, mamela anao hahita antsipiriany misimisy kokoa, ary milalao ny lalao ankafizinao miaraka amin'ny fandrobohana tsara kokoa noho ilay efijery lehibe.
Herinaratra sy fitehirizana mifanaraka
Ity smartphone ity dia manana vidiny ambany noho izy ny mpamboatra azy, ny Helio P60. Mpikirakira antonony izay zara raha hahatonga ny vidiny farany ho lafo kokoa, mba hahafahanao mividy azy io nefa tsy mangovitra ny paosinao. Na izany aza, amin'ny tenin'ilay marika ihany, dia mpamokatra fitaovana matanjaka ampy ahafahana manao multitask, ary koa milalao lalao matanjaka sy mavesatra tokoa.
Ho an'ny fahaiza-mitahiry, mahita safidy samihafa isika arakaraka ny maodely voafantina. Hitantsika araka izany:
Ny BISON X10 dia manohana 4GB + 64GB
Ny BISON X10 Pro dia manohana 4GB + 128GB
Ny tena maha samy hafa ny maodely roa (ny Pro sy ny mahazatra) ankoatra ny fitehirizana, dia ny fonony aoriana, satria ny X10 Pro dia misy fonony vita amin'ny fingotra ho fiarovana fanampiny mitete. Andininy iray tokony hotadidina ao an-tsaina raha matetika no misy ny tsy fomban'ity fomba ity, satria afaka manaisotra anao amin'ny olana mihoatra ny iray izy. Ho fanampin'izay dia misy koa fiarovana ny rantsantanana ho anao izay mankahala fa ny efijery dia nomarihin'izy ireo.
Ny zavatra ataon'ny maodely roa tonta dia ao amin'ny Fakan-tsary triple 20MP, nampidirina ao amin'ny maodeliny mifanaraka aminy, ary koa bokotra roa tsy miankina azo ovaina.
Mandrosoa sy vidiny
Ny BISON X10 sy BISON X10 Pro dia ho hita manerantany amin'ny 11 Oktobra ao amin'ny AliExpress, miaraka amin'ny vidiny izay hanomboka amin'ny $ 119.99.
Ankoatra izany, UMIDIGI dia manome singa 10 an'ny BISON X10 na X10 Pro manerantany ary ny fakan-tsarimihetsika TWS UMIDIGI AirBuds Pro farany teo. Raha liana handray anjara ianao dia afaka miditra amin'ny raffle ary mahazo vaovao misimisy ao amin'ny ny tranonkala ofisialin'ny UMIDIGI.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Hihaona amin'ny BISON X10 Series an'i UMIDIGI, finday avo lenta ho an'ny mpitsangatsangana
Ny fampiharana 3 tsara indrindra hijerena tanora kokoa ho an'ny Android
Ny fampiharana 4 tsara indrindra amin'ny fahana Instagram ho an'ny Android